somalinwo.com | Contact Us
Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed
“Somali National Women Organization”
UJEEDADA LOO ASAASAY WAXAY TAHAY:
Inuu ka shaqeeyo arrimaha Horumarinta Haweenka Soomaaliyeed
Inuu isu keeno iskuna baadi doono Haweenka Soomaaliyeed si ay uga tashadaan danahooda iyagoo mideysan
Inuu u istaago sidii Haweenka ay u heli lahaayeen xuquuqdooda, sida saamiga ay ku leeyihiin Dowladda Federaalka & maamullada gobolada dalka.
Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed wuxuu si buuxda taageero hiil iyo hooba leh ula garab taagan yahay inuu caawiyo una ilaaliyo xuquuqdooda haweenka naafada ah, gabdhaha agoonta iyo haweenka ku dhibaateysan dalka gudihiisa.
Ururka Haweenka Qaranka wuxuu dardar geliyaa horumarinta nabadda iyo taageerada Dowladda Federaalka ah.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe iyo dhammaan haweenka xubnaha ka ururkaan waxay ballanqaadeen inay geed dheer iyo mid gaabanba u korayaan sidii uu u muuqan lahaa doorka Haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda.
Haweenka Soomaaliyeed ee jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaa loogu bishaareynayaa inay Websit-ka Ururka Qaranka Soomaaliyeed www.somalinwo.com kala socon karaan macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Haweenka.
Sidaas darteed Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed waxaad kala soo xiriiri kartaa E-mailkaan:- contact@somalinwo.com si ay uga qeyb qaataan ololaha lagu horumarinayo Haweenka waxay la soo xiriiri karaan.